I-Syntowin ye-Syntowin ye-Matraress Matress | Ipokotho yentsahlobo yomatrasi
I-15cm iqokelela umatrasi
I-20cm iqokelela umatrasi
I-25cm iqokelela umatrasi
I-3 ihotele yehotele
I-foam ye-foam eqhelekileyo
IZiko leMigangatho yokulala
Umzi-mveliso woomatrasi waseSynwin ikakhulu uvelisa umatrasi wasentwasahlobo, umatrasi wepokotho yasentwasahlobo kunyebonnell spring umatrasi eTshayina. Kutheni ukhethe thina.
I-15 YEARS IMVELISO YEMATRESSI ①
Iminyaka eyi-15 yamava okwenza oomatrasi kunye nezixhobo zomandlalo.
30000PCS ISIPHUMO SENYANGA ③
30000 iipcs imveliso yenyanga, unikezelo oluzinzileyo, ukuhanjiswa ngokukhawuleza
100% AMAVA okuthumela ngaphandle ⑤
I-Synwin umatrasi ngaphezulu kweminyaka eli-14 yamava okuthumela kumazwe angaphandle kwihlabathi liphela, yiya minyaka le intle njengeCanton Fair, i-CIFF ifenitshala elungileyo,
② 70% IMALI ERAW EYENZIWE THI
I-70% yezinto eziluhlaza ezenziwe sithi, ngokukodwa kwiminyaka engama-32 yamava kwinkqubo yasentwasahlobo
④ 80000 M2 INDAWO YOKWENZA
Umzi-mveliso wethu uneemitha ezizikwemitha ezingaphezulu kwe-80000, uqinisekise unikezelo lwenyanga oluzinzile kumatrasi.
⑥ ODM KUNYE ne-OEM
Ukubonelela ngesicwangciso se-ODM kunye ne-OEM kunye nenkonzo yokumisa enye.
NjengengcaliChina umenzi womandlalo, Synwin, ibonelelaumatrasi wesiko, pocket spring umatrasi, umatrasi wase bonnell,umatrasi wentwasahlobo oqhubekayonjl.
I-Synwin, ababoneleli ngoomatrasi abachwepheshile-Umatrasi wethu usetyenziswa ngokubanzi kwiivenkile ezithengisayo, iivenkile ezinkulu, umthengisi wehoseyile, umsasazi kunye neeprojekthi zehotele ezinkwenkwezi njl.njl.
I-100% yokuthengisa ngokuthe ngqo kwi-Factory-Akukho bantu baphakathi benza umahluko, gcina iindleko ezininzi, kwaye kukunceda ufumane ixabiso elikhuphisanayo.
Iminyaka eyi-15 isiqinisekiso senkqubo yasentwasahlobo, Ngaphezu kokuthuthuzela. Ukulala kamnandi ebusuku kuqala komatrasi ofanelekileyo.
Umfanekiso woyilo wasimahla womthengi we-intanethi, Nceda uthengise ngokukhawuleza.
I-RSB-PT23, umqamelo wokusetyenziswa kwekhaya laseBonnell ekhaya
I-RSP-BT26, i-Pocket spring roll kwibhokisi
I-RSP3-ETM25.5 I-Memory foam pocket spring roll up
RSB-R22 Roll up bonnell spring online umatrasi
I-RSB-2BT Amacala amabini asebenzisa i-latex+inkumbulo ye-foam yehotele umatrasi
I-RSP-2S Economic kwi-intanethi ye-ODM umatrasi wasentwasahlobo
RSB-B21 Ukuqengqeleka kwibhokisi eqinileyo phezulu sebenzisa umatrasi
2000$USD isaphulelo for 40HQ, thumela umbuzo Ngoku!
Intwasahlobo yaseSynwinumenzi woomatrasi , ukususela ngo-2007, ibekwe kwiFoshan, China. Siye sathunyelwa ngaphandle oomatrasi ngaphezulu kweminyaka eli-15. Njengoumatrasi wesiko,umatrasi wasentwasahlobo,umatrasi we-bonnell wasentwasahlobo, umatrasi wepokotho yasentwasahlobo kunye nomatrasi wehotele njl. Ngaxeshanye, njengesiqheloababoneleli ngoomatrasi, asikunikezeli kuphela umatrasi wesayizi yesiko, kodwa sinokucebisa isimbo esidumileyo ngokuhambelana namava ethu okuthengisa. Umatrasi wethu usetyenziswa ngokubanzi kubathengisi, iivenkile ezithengisayo, iivenkile ezinkulu, abathengi be-intanethi kunye nezinye iiprojekthi zehotele njl.
Sizinikela ekuphuculeni ishishini lakho loomatrasi. Masizibandakanye kwimarike kunye. I-Synwin umatrasi iqhubeka ihamba phambili kukhuphiswano lwemalike. Singanikezela ngenkonzo yoomatrasi ye-OEM/ODM kubathengi bethu, bonke oomandlalo bethu basentwasahlobo banokuhlala iminyaka eyi-15 kwaye bangehli.
2021 New Pocket coil Umatrasi uyeza
Umatrasi womqamelo omtsha upapashe
Pakisha ngomatshini wokuRola
Iindawo ezi-3 zepokotho engundoqo kwindawo yokugcina impahla
Njengomvelisi woomatrasi waseTshayina weminyaka eli-15, I-Synwin ibonelele abathengi behlabathi ngowona mgangatho ulungileyo ngexabiso lokhuphiswano lwefektri,
Ababoneleli boomatrasi bakwa-Synwin banikwe inkxaso ephezulu kubathengi boomatrasi babo ngaphakathi nangaphandle. Samkela umatrasi wesiko, nayiphi na isayizi, nayiphi na imali, nayiphi na ipateni ekhoyo. I-Synwin ibonelela ngamacandelo kwi-Serta yasekhaya, i-Sealy, i-Kingkoil, i-Slumberland kunye nezinye ii-brand ezidumileyo zamazwe ngamazwe ngaphezu kweminyaka emi-4. umgangatho wemveliso wamkelwa kakhulu ngabathengi bethu.
Ihotele ye-5 Star
IiVenkile zefanitshala eziPhezulu kunye neeVenkile zoomatrasi
IWebhusayithi yokuThenga kwi-Intanethi
I-Synwin inokuvelisa umatrasi wesiko, i-pocket spring umatrasi, i-bonnell spring umatrasi kunye ne-spring matrasi eqhubekayo,umatrasi wehotele etc. Apha ukunika wethuumenzi woomatrasi iindaba zenkampani, uyilo olutsha loomatrasi, ipateni entsha, kunyeababoneleli ngoomatrasi ulwazi olutsha. Apha, unokuyibona ngokwenene intshayelelo yethu yefektri, inkcubeko yenkampani, iqela lentengiso, kunye neeshoto zemveliso yokwenyani.
Funda nje umzuzu ukuze ufumane ukuqonda ngokukhawuleza kwe-Synwin!
Yintoni umatrasi wasentwasahlobo?
Ezinye iingcebiso zokuthenga kumatrasi
Ngowuphi umatrasi ofaneleke ngakumbi ukuba abantwana balale?
Unokukhetha njani i-pocket spring mattress?
THETHA NATHI NGOKU,
Sithandwa, ndiza kuphendula kwiiyure ezili-12. Wonke umyalezo wakho ukhuselwe!
Sifumane kwi-alibaba: swmattress.en.alibaba.com.
Xelela: +86-757-85519362/ +86 -757-85519325
Yongeza: NO.39Xingye Road, Ganglian Industrial Zone, Lishui, Nanhai Distirct, Foshan, Guangdong, P.R.China
Qhagamshelana neeNtengiso eSYNWIN.
Copyright © 2022 Synwin Mattress (iGuangdong Synwin Non Woven Technology Co., Ltd.) | Onke amalungelo agciniwe 粤ICP备19068558号-3